Uhlu Lwezakhiwo Ukuthengisa Nokuqasha eMelbourne, eVictoria
Izinkampani zefenisha in Melbourne
Izinkampani zefenisha in Victoria
Amakhaya okuhlala in Melbourne
Amakhaya okuhlala in Victoria
Izindlu in Melbourne
Izindlu in Victoria
Ukuhlanza Amakhontrakthi in Melbourne
Ukuhlanza Amakhontrakthi in Victoria
Ishicilelwe ngu Office Plus Furniture
ukubuka Izinkampani zefenisha eshicilelwe 1 week ago
ukubuka Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya eshicilelwe 10 months ago
Ishicilelwe ngu Lexi Singh
ukubuka Ukuhlanza Amakhontrakthi eshicilelwe 1 year ago
Ishicilelwe ngu OZ Duct
ukubuka Ukuhlanza Amakhontrakthi eshicilelwe 2 years ago
Real Estate Listings For Sale and For Rent in Melbourne, Victoria
IMelbourne ((lalela) i-MEL-bnrn) ​​iyidolobha elikhulu nedolobha elinabantu abaningi esifundazweni sase-Australia iVictoria, nedolobha lesibili elinabantu abaningi e-Australia nase-Oceania. Igama laso libhekisa emhlanganweni wasemadolobheni ongamakhilomitha angama-9,993 (3,858 sq mi), ohlanganisa indawo yedolobha nomasipala abangama-31, futhi okuyigama elivamile lesikhungo salo sedolobha. Idolobha lithatha ingxenye enkulu yogu lwePort Phillip bay bese lisakazeka ezindaweni eziqonde emabangeni aseDandenong naseMacedon, eMornington peninsula naseYarra Valley. Inabantu ababalelwa ezigidini ezi-5 (i-19% yabantu base-Australia), futhi izakhamizi zayo kuthiwa "ngamaMelburni" .Lomuzi wasungulwa ngomhlaka 30 Agasti 1835, koloni lwaseBrithani laseNew South Wales ngaleso sikhathi abafokazi abavela koloni lweVan Diemen's Land (iTasmania yanamuhla). Yafakwa njengendawo yokuhlala yaseCrown ngonyaka we-1837, futhi yaqanjwa yiMelbourne yi-Governor General Richard Bourke ngomhlaka 10 Ephreli 1837 ukuhlonipha uNdunankulu waseBrithani, uWilliam Lamb, 2nd Viscount Melbourne. Ngo-1851, eminyakeni emine emva kokuba iNdlovukazi uVictoria imemezele ukuthi iyidolobha, iMelbourne yaba inhloko-dolobha yekoloni elisha laseVictoria. Ngemuva kokugijinyelwa kwegolide lokunqoba kwe-1850s, leli dolobha langena esikhathini eside lapho, ngasekupheleni kweminyaka yama-1880, lase liliguqule laba elinye lamadolobha amakhulu futhi acebile emhlabeni. Ngemuva komfelandawonye wezwe lase-Australia ngo-1901, lasebenza njengesihlalo sesikhashana sikahulumeni walesi sizwe esisha kwaze kwaba yilapho iCanberra iba inhlokodolobha yaphakade ngo-1927. Namuhla, siyisikhungo sezimali esihola phambili esifundeni sase-Asia-Pacific futhi sisezingeni le-15 ezikhungweni zezezimali zomhlaba I-Index.I-Melbourne iyikhaya lezindawo eziningi ezaziwa kakhulu e-Australia, njengeMelbourne Cricket Ground, igalari Yesizwe saseVictoria neRoyal Exhibition Building ebhalwe World. Futhi yindawo okwazalelwa kuyo impressionism yase-Australia, imithetho yezemidlalo yase-Australia, kanye nezimboni zefilimu nezethelevishini zase-Australia. Muva nje, kuye kwahlonzwa njenge-UNESCO City of Literature kanye nesikhungo somhlaba wonke kwezobuciko basemgwaqweni, umculo obukhoma nomdlalo weshashalazi. Iphatha imicimbi emikhulu yaminyaka yonke efana ne-Australia Grand Prix, i-Australia Open kanye neMelbourne Cup, futhi ibambe nemidlalo yama-Olimpiki Ehlobo Yango-1956 kanye neMidlalo Yezizwe Yama-2006. Ngenxa yokulinganisa kakhulu kwezokuzijabulisa, ezokuvakasha nezemidlalo, kanye nemfundo, ukunakekelwa kwempilo, ucwaningo nentuthuko, iMelbourne ihlala ibalwa njengedolobha elihlonishwa kakhulu emhlabeni ngobuningi bezimali zika-2010s. Isikhumulo sezindiza esikhulu esisebenza kuleli dolobha yiMelbourne Airport (futhi esibizwa ngokuthi yi-Tullamarine Airport), okuyisona besesibili kakhulu e-Australia, kanye netheku lase-Australia elixakeke kakhulu ePort of Melbourne. Isiteshi sayo esikhulu sesitimela esikhulu isiteshi saseFlinders Street kanti isiteshi esikhulu somqeqeshi wesitimela kanye nomqeqeshi wasemgwaqweni yisiteshi saseSouthern Cross. Ibuye ibe nenethiwekhi ebanzi kunazo zonke zomgwaqo onguthelawayeka e-Australia kanye nenethiwekhi enkulu yedolobha yama-tram emhlabeni.